Itiyoophiyaan Hojjattoota Tokkummaa Mootummootaa Hanga Tokko Gadhiiftee Jirti
Alaabaa Tokkummaa Mootummaa wajjira Niiw Yoorki bira (Suuraa faayilii)
Hojjattonni Tokkummaa mootummootaa kanneen Finfinnee keessatti hidhamanii turan keessa 6 gadhiifamuu kan Kamiisa kaleessaa ibsan dubbii himaan Tokkummaa Mootummootaa Steefan Juriik, garu kanneen biroon 5 fi namnii maatii isaanii ta’e tokko amma iyyu hidhaa keessa jiru jedhan.
Yoo xiqqaatee hojjattonni Tokkummaa Mootummootaa fi firottan isaanii 16 gara jalqaba baatii kanaatti kan hidhaman yoo ta’u, dhalattonni Tigraay hedduminaan hidhuun bal’inaan gaggeeffamaa akka jiru gabaafamaa jira.
Gosa irratti hirkachuun tarkaanfiin fudhatamu kun haala jiru hammeessuun daafoon isaa gara haala biraatti geessa jechuun isa dubbataa turretti nu geessaa jedhan duguggaa sanyii ittisuu kan ilaaleen barreessaa duree tokkummaa mootummootaaf gorsituu addaa ta’an Wairimu Nideriituu.
Nideriituun ibsa gaafa Robii baasaniin, haallii Itiyoophiyaa keessaa gad adeemaa buluu isaaf yaaddoo qaaban irra deebi’uun kan ibsan yoo ta’u, gosa irratti hirkachuun nama hidhuun itti fufuu fi hojjattoota Tokkummaa Mootummootaa kan ta’an dabalatee dhalattoota Tigraay irratti hidhaa gaggeeffamu balaaleeffatan.
Kutaan suun hokkara gosoota gidduu seenuun gara duguggaa sanyiitti geessuu waan maluuf , hatatamaan tarkaanfiin fudhatamuu danda’uu martii hojii irra oolee daran akka hin hammaannee ta’u qaba jedhan Nideriituun.
Gosa irratti hundaa’ee hin hiinee kan jedhau polisiin, garu garee ABUT isa mootummaa Itiyoophiyaa waraanaa jiru kaneen deggerantu hidhamee jedhee jira.